Dabada dumarka raaxo ma laga helaa feeling women - iftineducation.com
iftineducation.com – Haweenka badankooda kacsi iyo raaxo kama dareemaan futada, keliya waxay ka dareemaan xanuun marka looga tagayo dabada, taasna waxaa keenaya boqa dabada aad buu u yar yahay cambarka oo kale ma aha sidoo kale waa meel aan dhacaan keenaynin oo qallalan, waxaa isweydiin mudanmaxaa loo dhahaa gabdho ayaa jira wasmada futada jecel?
Taas waxaa looga jawaabayaa gabdhaha kacsiga badan marka ay kacsadaan cambarka iyo meelaha u dhow raaxo ayay ka dareemaan marka haddii gadaal wax laga geliyo iyadoo qooqan way u baranaysaa waxaa isku xirmaya labada meelooda , marka hore inay xanuunsato ayaa laga yaabaa laakin kaddib ay ka hesho balse heer waxay gaaraan hablaha qaarkooda inay dalbadaan galmada gadaal oo marka sidaa ay ku biyabbaxaan iyadoo gacanteeda ku riixayso kintirka.
Gabdhaha qaar waxay ku seegaystaan faraynta dabada, gabadha u barata gadaal dabadeeda way furmaysaa marka laga taabto.
Waxaa la sheegaa naagaha dhibaatooyin badan inay ka soo gaaraan galmada noocaas ah, waxaa ka mid ah haddii si xoog loo isticmaalo inay meesha ka weynaato oo ay ka dildilaacdo baawasiir uga soo baxo, sidoo kale jirrooyinka faafa si degdeg baa looga qaadi karaa isticmaalka dabada, madaahibta afarta waa xaaran in dabada geedka la geliyo laakin afkeeda bahalka waa lagu xoqi karaa sida kutubta fiqiga ku cad.
Nimanka marka xaggooda la eego aad bay u rabaan dabada haweenka taas waxaa keenayo meesha ayaa ciriiri ah aadna way u kulushahayyaamacaan labadaooda halkaan ka akhriso sidaas ayay uga leexdaan cambarka sidoo kale naagaha uurka ka baqaya waxay dhiibaan gadaal, macaanka futada waxaa sabab u ah ciriiriga iyo kulayka ay dabada dumarka leedahay.
Meesha waxaa ku hareera bari oo aad u kulul dabada dab oo kale ka dhegayso. galmada kadaloobiga oo faah faahsan kalhkan ka akhriso si aad u ugaato raaxada dumarka qaababka ay tahay.
Muno ” Saaxiibkey Waa uu Mashquul Badan Yahay Imana Siiyo Waqti Aan Kula Sheekeysto..”Ila Tali